Fanontaniana momba ny simulators sy hanampy-ons
Fanontaniana momba ny kaonty
Sceneries azo jerena ao amin'ny Rikoooo dia tsy nilaza ho azy, dia misy ny vahaolana? (Win 7 / 8 +)
Izany dingana miasa eo amin'ny samy Prepar3D sy FS2004.
By toerana misy anao, dia nametraka FSX ao amin'ny «C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight simulator X». Ny olana dia ny Windows 7 sy 8 + na Windows 10 tsy manana fanaraha-maso tanteraka ny antontan-taratasy ao anatin'ny «Microsoft Flight simulator X», izay manakana ny fandaharana avy nanoratra tao amin'ny fanahafana rakitra. Mba hamahana ny olana, mankanesa any «C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games», dia manao ny tsara Tsindrio eo amin'ny fampirimana «Microsoft Flight simulator X», tsindrio «Properties», dia ny «Security» vakizoro. Eto, misafidy «Users (xxxxxx)», dia tsindrio eo amin'ny «manova». Ao amin'ny varavarankely vao nisokatra, hifidy indray «Users (xxxxxx)», tsindrio eo amin'ny «Full fanaraha-maso», dia «fanovana». Ankehitriny, ianao ihany dia tsy maintsy tsindrio eo amin'ny «OK» sy Windows no vaovao farany ny alalana.
Torolalana amin'ny sary etsy ambany:
ny Alahady Aogositra 09 by rikoooo
I manampy izany?